Tonga ny iPad Pro 10,5 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe | Avy amin'ny mac aho
Tonga ny iPad Pro 10,5 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Farany dia voamarina izay nandrasantsika rehetra, ny fampahafantarana an'ny iPad Pro vaovao sy havaozina. Vaovao io iPad miaraka amina diagonal 10,5-inch izay mitombo ela ny fampidirana an'ity efijery vaovao ity.
Ny iPad Pro nahomby indrindra dia ny 9,7-inch ary izany no nanatsarana manokana ny diagonal hahatratra 10,5 santimetatra.
Manana iPad Pro 10,5-inch vaovao izahay Noho ny efijery vaovao sy 20% lava kokoa dia azo atao ny mampiditra kitendry feno habeny na eo amin'ny fonony na eo amin'ny efijery. Nihatsara kokoa ny efijery. Raha ny vaovao kosa dia manana ny tahan'ny fanavaozana ny efijery vaovao izay manomboka amin'ny 60 Hz ka hatramin'ny 120 Hz, noho izany dia ho tsara kokoa sy be ranoka kokoa ny sary. Ho fanampin'izany, ny Apple Pencil dia manana fanatsarana ihany koa, ankehitriny manana latency 20 ms miaraka amin'ity iPad Pro vaovao ity. Noho izany dia hanana fahatsapana manoratra bebe kokoa isika.
Ao anaty tendrombohitra a A10x Fusion puce miaraka amina enina enina, manome anao hafainganam-pandeha 30% haingana sy fanatsarana hafainganana 40%. Io no kinova farany tsara amin'ny iPad Pro noforonina hatreto. Tsy misy isalasalana, fahagagana izay hahatonga ny mpitia iPad hanao ny làlany amin'ity maodely vaovao ity.
Mitohy maharitra mandritra ny 10 ora ny bateria, ny fakan-tsary any aoriana dia 12 MPx, fandraisam-peo 4K ary fakan-tsary eo aloha 7MPx. Aseho koa ireo kojakoja vaovao ahafahantsika mamerina azy ireo amin'ny tanana ara-potoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPad » Tonga ny iPad Pro 10,5 miaraka amin'ny fanatsarana lehibe
Apple dia namerina ny foto-kevitry ny mozika an-trano miaraka amin'ny HomePod
Lasa zava-misy ao amin'ny Apple ny AR